Xakamaynta xaalada wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah, ficil ahaan, waa isdhexgalka astaamaha jirka iyo nafleyda ee habka sameynta compost. Dhinac marka laga eego, xaaladda xakamaynta ayaa ah is dhexgal iyo isuduwid. Dhinaca kale, dabaylo kala duwan ayaa isku qasan, dabeecado kala duwan iyo xawaare kala duwanaansho awgeed.
Qoyaanku waa shardi muhiim u ah Bacriminta dabiiciga ah. Markay socoto nafaqaynta digada, qoyaanka ay ku xidhantahay asalka asalka ah ee bacriminta waa 40% ilaa 70%, taas oo hubinaysa habsami u socodka nafaqaynta. Qoyaanka ugu habboon waa 60-70%. Waxyaabaha qoyaanka maadada oo aad u sareyso ama aad u hooseeya ayaa saameyn ku yeelan kara dhaqdhaqaaqa aerobe sidaa darteed qawaaniinta qoyaanka waa in lagu sameeyaa ka hor halsano. Marka qoyaanka maaddada uu ka yar yahay 60%, heerkulku si tartiib tartiib ah ayuu kor ugu kacayaa shahaadada kala-baxaana waa ka liidataa. Marka waxyaabaha qoyaanka ay ka bataan 70%, hawo qaadashada ayaa caqabad ku ah waxaana la abuuri doonaa halsano anaerobic ah, taas oo aan ku habooneyn horumarka halsano oo dhan.
Daraasaduhu waxay muujiyeen in si ku habboon kor loogu qaadayo qoyaanka alaabta ceyriinku ay soo dedejin karto bisaylka iyo xasiloonida compost. Qoyaanka waa inuu hayaa 50-60% marxaladda ugu horeysa ee bacriminta ka dibna waa in lagu ilaaliyaa 40% ilaa 50%. Qoyaanka waa in la xakameeyaa wax ka hooseeya 30% ka dib marka la bacrimiyo. Haddii qoyaanku sarreeyo, waa inuu ku qalalaa heerkulka 80 ℃.
Waa natiijada waxqabadka microbial, taas oo go'aamisa isdhexgalka qalabka. Marka heerkulka bilowga ah ee nafaqeynta uu yahay 30 ~ 50 micro, shey-baareyaasha kuleylka ee thermophilic-ka ayaa hoos u dhigi kara qaddar badan oo walxo dabiici ah waxayna ku kala daadan karaan cellulose si dhakhso leh muddo gaaban, sidaas awgeedna waxay kor u qaadayaan kororka heerkulka meeriska. Heerkulka ugu fiicani waa 55 ~ 60 ℃. Heerkulka sare waa xaalad lama huraan u ah in lagu dilo jeermiga, ukunta cayayaanka, abuurka haramaha iyo walxaha kale ee sunta iyo waxyeelada leh. 55 ℃, 65 ℃ iyo 70 temperatures heerkul sare saacado yar ayaa dili kara walxaha waxyeelada leh. Badanaa waxay ku qaadataa laba illaa saddex toddobaad heerkulka caadiga ah.
Waxaan soo sheegnay in qoyaanku yahay shay saameeya heerkulka compost. Qoyaanka xad dhaafka ah ayaa hoos u dhigaya heerkulka compost, iyo hagaajinta qoyaanka ayaa faa'iido u leh kor u qaadista heerkulka marxaladda dambe ee halsano. Heerkulka sidoo kale waa la yareyn karaa iyadoo lagu daro qoyaan dheeraad ah.
Wareejinta raso waa hab kale oo lagu xakameeyo heerkulka. Adoo wareejinaya raso, heerkulka meeriska maaddada si wax ku ool ah ayaa loo xakameyn karaa, uumi-baxa biyaha iyo heerka-socodka hawduna waa la dardargelin karaa. Kumashiinka rogayaasha compost waa hab wax ku ool ah oo lagu xaqiijiyo halsano waqti-gaaban ah. Waxay leedahay astaamaha hawlgalka fudud, qiimo jaban iyo waxqabad aad u fiican. Cmashiinka leexinta ompost si wax ku ool ah u xakameyn kara heerkulka iyo waqtiga halsano.
Xakamaynta saamiga C / N.
Saamiga C / N ee saxda ahi wuxuu kobcin karaa halsano halsano ah. Haddii saamiga C / N uu aad u sarreeyo, sababtoo ah nitrogen la’aanta iyo xaddidaadda deegaanka sii kordhaya, hoos u dhaca ku yimaada walxaha dabiiciga ayaa hoos u dhacaya, taasoo ka dhigaysa wareegga compost-ka mid dheer. Haddii saamiga C / N uu aad u hooseeyo, kaarboonku si buuxda ayaa looga faa'iideysan karaa, oo nitrogen-ka xad-dhaafka ah ayaa lagu waayi karaa ammonia. Kaliya ma saameyneyso deegaanka, laakiin sidoo kale waxay yareysaa waxtarka bacriminta nitrogen. Microorganisms waxay sameysaa protoplasm microbial inta lagu jiro halsano halsano ah. Protoplasm wuxuu ka kooban yahay 50% kaarboon, 5% nitrogen iyo 0. 25% fosfoorik acid. Cilmi baarayaashu waxay soo jeedinayaan in saamiga C / N ee ku habboon uu yahay 20-30%.
Qiyaasta C / N ee compost dabiici ah ayaa lagu hagaajin karaa iyadoo lagu darayo qalabka sare ee C ama sare ee N. Qalabka qaar, sida caws, haramaha, laamaha iyo caleemaha, waxaa ku jira faybar, lignin iyo pectin. Maaddaama ay ka kooban tahay kaarboon / nitrogen badan, waxaa loo isticmaali karaa in lagu daro kaarboon sare. Digada xoolaha iyo digaaga waxay ku badan tahay nitrogen waxaana loo isticmaali karaa inay ku darsato nitrogen sare. Tusaale ahaan, heerka isticmaalka ammonia nitrogen ee digada doofaarka ee noolaha waa 80%, taas oo si wax ku ool ah u kobcin karta koritaanka iyo taranka noolaha isla markaana dardar gelin karta nafaqeynta.
Ku mashiinka granulation bacriminta cusub ku habboon marxaladan. Waxyaabaha lagu daro waxaa lagu dari karaa shuruudo kala duwan markii alaabada ceyriin ay galaan mashiinka.
Air-qulquli iyo bixinta oksijiinta.
Wixii loogu talagalay halsano digada, waa muhiim in la helo hawo iyo ogsijiin ku filan. Shaqadeeda ugu weyn waa inay bixiso oksijiin lagama maarmaan u ah koritaanka noolaha. Heerkulka ugu badan iyo waqtiga nafaqeynta waxaa lagu xakameyn karaa iyadoo la hagaajinayo heerkulka meeriska iyada oo loo marayo socodka hawada cusub. Socodka hawada oo kordhay waxay ka saari kartaa qoyaanka iyadoo la ilaalinayo xaaladaha heerkulka ugu wanaagsan. Hawo hagaagsan iyo oksijiin waxay yareyn kartaa luminta nitrogen iyo ur soosaarka urta.
Qoyaanka bacriminta dabiiciga ah waxay leeyihiin saameyn ku yeelashada hawada, dhaqdhaqaaqa microbial iyo isticmaalka oksijiinta. Waa qodobka ugu muhiimsan eebacriminta aerobic. Waxaan u baahanahay inaan xakameyno qoyaanka iyo hawo qaadashada iyadoo la raacayo astaamaha maaddada si loo gaaro isku xirnaanta qoyaanka iyo oksijiinta. Isla mar ahaantaana, labadoodaba waxay dhiirrigelin karaan koritaanka iyo taranka noolaha waxayna hagaajin karaan xaaladaha halsano.
Daraasaduhu waxay muujiyeen inay muujinayaan in isticmaalka oksijiinta uu si xawli ah uga kordhayo 60 ℃, uuna si tartiib ah ugu korayo 60 ℃, uuna ku dhow yahay eber ka sarreeya 70 ℃ Hawo-qaadashada iyo oksijiinta waa in lagu hagaajiyaa heerkulka kala duwan.
Qiimaha pH wuxuu saameyn ku yeelanayaa geedi socodka halsano oo dhan. Marxaladda ugu horreysa ee nafaqeynta, pH waxay saameyn doontaa dhaqdhaqaaqa bakteeriyada. Tusaale ahaan, pH = 6.0 waa barta muhiimka u ah digada doofaarka iyo balka. Waxay joojisaa kaarboon laba ogsaydhka iyo soosaarka kuleylka ee pH <6.0. At pH> 6.0, kaarboon laba ogsaydh iyo kuleylkeedu si dhakhso leh ayuu u kordhaa. Marxaladda heerkulka sare, isku darka pH sare iyo heerkulka sare wuxuu keenaa ammonia volatilization. Microbes waxay ku baaba'aan aashitada dabiiciga ah iyagoo adeegsanaya compost, taasoo hoos u dhigeysa pH ilaa 5.0. Asiidhyada dabiiciga ah ee kacsan ayaa uumi baxa marka heerkulku kaco. Isla mar ahaantaana, nabaad-guurka ammonia ee walxaha dabiiciga ayaa kordhiya qiimaha pH. Ugu dambeyntii, waxay ku xasilisaa heer sare. Qiyaasta ugu badan ee lagu nafaqeeyo ayaa lagu gaari karaa heerkulka nafaqeynta badan oo leh qiyamka pH oo u dhexeeya 7.5 ilaa 8.5. PH sare wuxuu kaloo sababi karaa ammonia buuq badan, sidaa darteed pH-ka waa lagu yareyn karaa iyadoo lagu daro alum iyo fosfoorik acid.
Marka la soo koobo, ma sahlana in la xakameeyo hufnaanta iyo dhammaystirka halsano ah walxaha dabiiciga ah. Hal walxo, tani way sahlan tahay. Si kastaba ha noqotee, waxyaabo kala duwan ayaa is dhexgala oo is xakameeya. Si loo xaqiijiyo guud ahaan hagaajinta xaaladaha nafaqeynta, waxaa lagama maarmaan ah in lala shaqeeyo geeddi-socod kasta. Marka xaaladaha kontoroolku ku habboon yihiin, halsanogu si habsami leh ayuu u socon karaa, oo markaa aasaaska u dhigayaa soo-saarkabacrimin dabiici ah oo tayo sare leh.